केन्द्राध्यक्षलाई मन्त्रीको हप्कीदप्की – ‘तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ?’::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | सोम, चैत्र ११, २०७५
केन्द्राध्यक्षलाई मन्त्रीको हप्कीदप्की – ‘तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ?’
जनकपुरधाम, ११ चै ।
परीक्षा अनुगमनका क्रममा प्रदेश–२ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकलाई हप्कीदप्की गरेका छन्। मन्त्रीको यो कदमलाई अपमानको संज्ञा दिँदै शिक्षक आन्दोलित भएका छन्।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को पहिलो दिन आइतबार बिहान ९ बजे मन्त्री साह जनकपुरको सरस्वती नमुना मावि पुगेका थिए। शिक्षक शंकरकुमार दासलाई कार्डबिना देखेपछि मन्त्रीले केन्द्राध्यक्ष सत्यनारायण मण्डल बोलाएर परीक्षा हलबाट बाहिर निकाल्न निर्देशन दिए। मन्त्रीले दासलाई परिचयपत्रमा फोटो किन नटाँसेको भनी प्रश्न गरेका थिए।
केन्द्राध्यक्ष मण्डलले उनी आफ्नै विद्यालयको शिक्षक रहेको जवाफ फर्काएका थिए। त्यसपछि मन्त्रीले आफूलाई गाली गरेको मण्डलले सुनाए। ‘तिमी खत्तम हेडमास्टर रहेछौं। तिमीलाई हेडमास्टर कसले बनायो ? कसले केन्द्राध्यक्ष बनायो? ’, मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तिम्रो कुनै काम छैन। सस्पेन्ड गरिदिन्छु।’
मन्त्रीले फोटोबिनाको परिचयपत्र बोकेका निरीक्षक बेचन रामलाई भेटाए। राम पनि सोही विद्यालयका शिक्षक हुन्। मन्त्रीले सोधे, ‘फोटो किन नटाँसेको ? ’ मन्त्रीले भोलिदेखि परिचयपत्रमा फोटो टाँसेर आउन निर्देशन दिए।
फोटोबिनाको परिचयपत्र बोकी परीक्षामा निरीक्षक बनेका शिक्षकलाई किन यस्तो गरेको भनेर प्रश्न सोधेको मन्त्री साहले स्वीकार गरे। ‘मैले परीक्षालाई मर्यादित बनाउन र परीक्षामा कडाइ गर्न शिक्षकको परिचयपत्र खोजेको थिएँ’, उनले भने।
४ सय १० परीक्षार्थी रहेको सरस्वती मावि केन्द्रमा आइतबार ४ सय ८ जना सहभागी भए। प्रत्येक कोठामा चार जना घुम्ती र केन्द्राध्यक्ष गरी २३ जना गार्ड खटिएका थिए। शंकर दास, सीमाकुमारी कर्ण, विनिता यादव र बेचन राम चार निरीक्षक परिचयपत्रमा फोटो नटाँसी परीक्षा हलमा थिए। उनीहरू ढिला गरी परीक्षा केन्द्रमा पुगेकाले फोटो टाँस्न ढिलाइ भएको केन्द्राध्यक्ष मण्डलले बताए।
शिक्षकद्वारा राजीनामा माग
नेपाल शिक्षक संघले मन्त्री साहको राजीनामा मागेको छ। संघले विद्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री साहले शिक्षकको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ। संघका प्रदेश २ अध्यक्ष मेघनाथ यादवले केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकको अपमान गर्ने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए। ‘मन्त्रीबाट जिल्लाभरिका ११ हजार २ सय ८५ परीक्षार्थीको भविष्यसँग खेलवाड भएको छ’, उनले भने। मन्त्री साहलाई कारबाही नगरे आन्दोलनमा उत्रिने शिक्षक संघका धनुषा अध्यक्ष राम सिनेही यादवद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय प्रदेश २ जनकपुरधामका निर्देशक रमाकान्त शर्माले मन्त्री साहले परीक्षालाई मर्यादित बनाउन प्रयास गरेको बताए। ‘मन्त्रीज्यूले त्यसअघि दुइटा परीक्षा केन्द्रमा अनुगमन गर्नुभयो’, उनले भने, ‘दुवै केन्द्रमा उहाँले परीक्षा मर्यादित बनाएकोमा केन्द्राध्यक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो। तर, विवाद भएको केन्द्रमा परीक्षा मर्यादित रूपमा सञ्चालन भएको नदेखेर उहाँले केन्द्राध्यक्षसँग चासो लिनुभएको मात्र हो।’ अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
सोम, चैत्र ११, २०७५ मा प्रकाशित